192.168.8.1 - Ungayithola Kanjani I-IP Router?
Ukuze ulungiselele i-router yakho, kuzofanela ungene ngemvume kuyo. Ngakho-ke yenza lokho, kufanele uqonde ukuthi Ikheli le-IP. Ungaqinisekisa ikheli le-IP elizenzakalelayo. Ikheli le-IP linezinombolo ezi-4 ezihlukaniswe izitobhu ezigcwele. Ikheli le-IP lasendaweni lenethiwekhi lizoqala ngo-192.168. Ama-Routers ajwayelekile afaka amakheli we-IP afana no-192.168.0.1 noma u-192.168.1.1. Kuncike kukhompyutha noma kudivayisi, indlela ozothola ngayo ikheli lakho le-IP lomzila izohluka. Ngezansi kukhona izinyathelo ngakunye.
Okokuqala, kufanele uzichaze ngala magama ama-2 - "i-router IP" kanye "ne-IP gateway ezenzakalelayo." I-IP ye-router isebenza njengokungena phakathi kwamathuluzi akho ne-inthanethi ebanzi yingakho ingaziwa nangokuthi "ikheli le-IP elizenzakalelayo. ” Wonke amathuluzi axhunywe kunethiwekhi efanayo adlulisela izimfuno zawo ngokuzenzakalela ku-router. Amathuluzi ahlukahlukene azoyibiza ngokuhlukile. IWindows PCS izoyibiza ngokuthi 'isango elizenzakalelayo' kanti amathuluzi e-iOS azogcina ikheli le-IP lomzila elingezansi 'komzila.'
Ngemuva kokuthi uthole i-IP yomzila ozenzakalelayo, ungavele uyibhale kubha yekheli lesiphequluli sewebhu ukufaka i-routers web interface.
Iya kumyalo osheshayo ngokuthola ibha yokusesha nokubhala 'cmd'. Iwindi elimnyama livela lapho uzodinga khona ukubhala 'ipconfig'. Ukuze uthole ikheli elizenzakalelayo lesango phequlula imiphumela.
Ngezansi kukhona izinyathelo ezilula kakhulu zokuhlola i-IP router:
Cindezela Apple imenyu (phezulu kwesikrini)
Khetha 'Isistimu yokuqala yokukhetha'
Khetha isixhumanisi senethiwekhi esisebenzayo
Phusha 'I-TCP / IP'ukhiye wokuthola ikheli le-IP ku-router kwesokudla
Okokuqala, thola indlela yoku: Izinhlelo zokusebenza> Amathuluzi Esistimu> Itheminali & bhala 'ipconfig'. Uzothola i-IP yomzila efakwe kuhlu ngaphandle kwe 'inet addr'.
Uma usebenzisa i-iOS8 noma i-iOS9, uzulazula uye ku-Amasethingi> i-WiFi bese ucindezela amanethiwekhi angenantambo onamathele kuwo njengamanje. Kungenzeka ingxenye ye-DHCP ukuthola ku-IP yomzila.
Uhlelo lokusebenza oluvela eceleni olwaziwa njenge-Wi-Fi Analyzer luyindlela elula yamathuluzi we-Android. Ngemuva kokuxhuma kuhlelo lokusebenza, shaya kwimenyu ethi 'Buka' bese ukhetha 'uhlu lwe-AP'. Uzobuka 'okuxhunywe ku: [Igama Lamanethiwekhi]'. Uma ushaya kuyo, iwindi liboniswa imininingwane yenethiwekhi nge-IP yomzila.
Kubha yomsebenzi, cindezela indawo yesixwayiso. Ngemuva kwalokho, cindezela kuxhunywe ku- [Igama Lamanethiwekhi] 'ohlwini oluvelayo. Shaya egameni lamanethiwekhi angenantambo futhi ngokulandelayo kulebula 'Inethiwekhi' ukukhombisa ukuwa ngekheli le-IP lomzila.
Indlela Yokuthola I-IP Yomzila Ozenzakalelayo
Ukuthola ikheli le-IP elizenzakalelayo le-router vele ulandele izinyathelo ezingezansi ezinikezwe -
1) yebha yomsebenzi vakashela imenyu yokuqala nokokufaka I-CMD enkundleni yokusesha.
2) ngemuva kokufaka umyalo we-CMD, umyalo osheshayo onesibonisi esimnyama uzokwembula.
3) Bhala umyalo 'ipconfig', Kumyalo osheshayo. Lo myalo ubandakanya - khombisa izilungiselelo ze-IP ezizenzakalelayo nokulungiswa kohlelo kanye ne-router exhunywe kuyo.
Indlela yokuthola i-IP address router ku-Windows
Bhala ku-Panel Yokulawula kubha yokusesha bese ucindezela isithonjana Iphaneli yokulawula;
Cindezela okuthi Buka izinga lenethiwekhi nemisebenzi ngaphansi I-inthanethi nenethiwekhi;
Cindezela egameni le-Wi-Fi, ukuze uthole eduze kwe-Connections;
Kuzovela iwindi lakamuva. Cindezela Imininingwane;
Uzothola i- wabelane ngekheli le-IP ku-IPv4 Default Gateway.